Quả Đào Tiên: Loại THẦN DƯỢC Mà Ít Ai Biết Đến | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Quả Đào Tiên: Loại THẦN DƯỢC Mà Ít Ai Biết Đến | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
iphitshi intsomi Kudala isiqhamo esiqhelekileyo sabantu baseVietnam. Ngokukodwa, yonke iminyaka eNtsha ukuya entwasahlobo, sinokubona lula umfanekiso weepesika kunye neentyantyambo zemithi yonke indawo. Nangona kunjalo, akuyena wonke umntu owaziyo kakuhle ngemvelaphi, ukuhlelwa kunye nokusetyenziswa kwesi siqhamo.
1 Iziqhamo ezikhethekileyo zeepesika
1.3 Izithako zesondlo
2 Zingaphi iindidi zeepesika ezikhoyo eVietnam?
2.1 Dao Yunnan
2.2 Ikhephu lePesika
2.3 UDao Moc Chau – Unyana La
3 Ukutya kweepesika ze-fairy ngobuhle kunye nempilo
4 UMAHLUKO Ipesika yePesika kunye nePesika
4.1 Iipesika zifana njani neeplum?
4.1.1 Inqaku eliqhelekileyo
4.1.2 Inqaku lomahluko
5 Ngaba iipesika zaseTshayina zingatyiwa?
5.1 Ukuchonga iipesika zaseTshayina
5.2 Ukwahlula ngeepesika Sapa Vietnam
6 Indlela yokupheka iipesika ezimnandi nezipholileyo ehlobo
6.3 Zeziphi izitya ezinokulungiswa ngeepesika ezifakwe emanzini?
Iziqhamo ezikhethekileyo zeepesika
Ipesika entsonkothileyo Apho ivela khona kusengumbandela oxoxwayo zizazinzulu ezininzi. Ngoko ke, kukho iimbono ezininzi ezahlukeneyo ngemvelaphi yesi siqhamo.
Abantu baseYurophu bakholelwa ukuba iipesika zaqala ukubonakala eTshayina kwaye zaziswa kummandla weMeditera ngendlela yeSilk.
Nanamhla oku, kusekho amabali athethwa ngabantu malunga nemvelaphi yeepesika ezayanyaniswa nebali lengxilimbela egama linguKhoa Phu eleqa ilanga.
Ezinye iimbono zithi umthi wepesika uvela eMzantsi Melika kwaye ngokutsho kophuhliso loqoqosho lwemarike, ngoku kukho phantse kuwo onke amazwe emhlabeni jikelele, kuquka neVietnam.
EVietnam, imithi yeepesika ikhuliswa phantse kuwo onke amaphondo kwilizwe liphela. Kuba lo mthi uvelisa iziqhamo uneempawu ezikhula kakhulu. Ngokuqhelekileyo, ukutyala nje isebe eligrunjwe emhlabeni, naluphi na uhlobo lomhlaba olunokwenzeka kunye nokunakekelwa kwemithi elula njengokunkcenkceshela, ukhula … umthi ungakhula. Yiyo loo nto abantu bewubiza ngelinye igama umthi wepesika, umthi wobomi.
Iipesika zingqukuva, zigudile, kwaye ezinye iindidi zineenwele ngaphandle kodwa kulula ukuzicoca. Abantu bahlala belima imithi yeepesika ngaphakathi endlwini hayi nje iziqhamo kodwa neenjongo zonyango.
Ibonelela ngemithombo eyahlukeneyo yeevithamini: iiVithamini A, C, E, B1,2,3,6.
Izondlo ezibalulekileyo kwimpilo yomzimba: iBeta-carotene, i-folate kunye ne-pantothenic acid.
Izongezelelo zamaminerali: i-calcium, i-potassium, i-magnesium, isinyithi, i-manganese, i-phosphorus, i-zinc.
Zingaphi iindidi zeepesika ezikhoyo eVietnam?
Ipesika yeentsiba eyaziwa njengelinye igama leYunnan peach, ekhule kuyo Sapa kwiphondo laseLao Cai, eVietnam. Iipesika zeSapa ziphakathi ngokomlinganiselo, zinesikhumba esirhabaxa xa ziphathwa, kwaye zinoboya. Into ephambili yi-crispiness yenyama kunye nokunambitheka okumuncu kwendalo. Olu hlobo lwepesika luneentlobo ezimbini eziphambili: ukuvuthwa kwangaphambili kunye nokuvuthwa kade.
Uhlobo oluvuthwa kwangethuba: Idla ngokudubula ekupheleni kukaFebruwari kwaye inokuvunwa kuphela ekuqaleni kukaMeyi. Iipesika zeYunnan ezivuthwa kwangethuba ziphakathi ngokomlinganiselo, zipinki ngombala, kwaye zinevumba elimnandi, nangona zineasidi kancinane. yitya.
Ukuvuthwa kade: Iintyatyambo zidubula ekuqaleni kuka February nasekuqaleni kuka July zingavunwa. Olu didi lukhulu kunolo luvuthwa kwangoko, kodwa incasa ayohlukanga kakhulu. Inzuzo yolu hlobo lwepentshisi kukuba i-peel imbewu, ayinamathele kwinyama, kwaye ilungele ngakumbi kubasebenzisi.
Ipesika yekhephu Ngokomyinge, zombini ulusu kunye nentlaka ngaphakathi zimhlophe, crispy, kunye nencasa emuncu kancinci. Olu hlobo lweepesika lukhula kakhulu kwi-Sapa, umthi ukhula kakuhle, ngoko unokumelana nemozulu embi.
UDao Moc Chau – Unyana La
Ipesika iplamu Ikwabizwa ngokuba yi-Moc Chau-Son La peaches, iipesika zinemilo eneempawu ezinomzantsi ongqukuva kodwa zinencam ethe chatha kancinci. Umbala wesiqhamo awufani, kodwa ukwahlula phakathi kwencam kunye nesiqu kubomvu oqaqambileyo ngelixa umzimba ongezantsi wesiqhamo u-pinkish-white yellow. Noko ke, xa sivuthiwe, sonke isiqhamo siba bomvu kancinci. Ngaphakathi kukho umaleko wenyama ekwabomvu kwepesika, ityiwa nembewu. Olu hlobo lwepesika luhlala luthengiswa ngabahwebi baseHanoi, ngoko lubizwa ngokuba ngabantu abaninzi Ipesika yaseHanoi.
Ukutya kweepesika ze-fairy ngobuhle kunye nempilo
Ukulwa nesifo samehlo esomileyo: Enkosi kwizithako beta-carotene – yinto eguqukayo ibe yivithamin A emzimbeni. Le ngqungquthela inceda ukugcina amehlo enempilo kwaye eqaqambileyo, ngakumbi kubantu abadala, ikhusela izifo zamehlo ezinobungozi ezifana namehlo omileyo abangela ukurhawuzelelwa, ukungaboni ngenxa yokuvuvukala, i-cataract.
Iipesika ezicholiweyo zilungile empilweni
Ukuphucula kunye nokuthintela izifo zesistim sokugaya: Da Lat Peach Isebenza kakhulu kwinkqubo yokugaya enempilo. Ngenxa yesiqulatho sefiber ephezulu, inceda ukuthintela ukuphazamiseka kwamathumbu amathumbu njengokuqunjelwa, izilonda zesisu, i-gastritis okanye i-hemorrhoids. Ngaloo ndlela, ukususa i-toxins kwi-intestinal tract, ukunciphisa amatye ezintso.
Ukunciphisa umzimba: Ngeekhalori eziphantsi, ezityebileyo kwifiber kunye nobumnandi bendalo, ijusi yepesika isetyenziswa kwiimenyu zokulahleka kobunzima. Zikuzalisa ngokukhawuleza kwaye zilawule ukulamba ixesha elide.
Ukongeza, iipesika ze-fairy nazo zinefuthe lokunciphisa ukuvuvukala kunye nokuvuvukala; ukuphucula impilo yentliziyo okanye ukuthintela umhlaza ngokufanelekileyo.
Isiqhamo sePeach sinexabiso elininzi kubantu, kungekuphela nje ngokwexabiso lezoqoqosho kunye nesondlo kodwa nexabiso lokomoya-uphawu lokuphila ixesha elide. Okwangoku, kwimarike yeziqhamo yelizwe kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zeepesika ezithengiswayo, ezixutywe neepesika zaseTshayina. Ke ngoko, inkqubo yeziqhamo yemimandla emithathu yeVinfruits-enenjongo yokuzisa abathengi ezona mveliso zeziqhamo ezisemgangathweni zasekhaya nezangaphandle, incasa yeprimiyamu, imvelaphi ecacileyo kunye nesiqinisekiso sokhuseleko lokutya. IVinfruits inqwenela ukuba ungayisebenzisa ngokukhuselekileyo kwimpilo yosapho lwakho.
UMAHLUKO Ipesika yePesika kunye nePesika
Ipesika iplamu Ngaba ifana nepesika yasentsomini? isengumbuzo wabantu abaninzi. Igama lesiqhamo nalo liyahluka ngokuxhomekeke kulwimi lommandla ngamnye. Ukuba kuMntla, igama lesiqhamo se-whip libizwa ngokuba yi-whip, ngoko ke kummandla oMbindi, isiqhamo saseNyakatho sibizwa ngokuba yipesika, ngelixa i-peach eNyakatho yaziwa ngokuba yi-fairy peach. Ngoko ke, ukuze sikwazi ukwahlula iipesika zeplum kunye neepesika zeefairy, kufuneka siqonde iimpawu zazo zombini ezi ziqhamo.
Iipesika zifana njani neeplum?
Ipesika njengeplam kwincasa eswiti, enencasa enencasa yendalo emuncu kancinane. Ngoko ke, zombini ezi ziqhamo zithandwa ngumntu wonke, zisetyenziselwa injongo yokupholisa okusebenzayo. Ukubunjwa kwezondlo kwezi ntlobo zimbini zeziqhamo ziyafana, ngoko ke iziphumo ziyafana. Ibandakanya izithako ezinempilo ezifana nezi:
Iivithamini ezahlukeneyo: Zombini iplamu kunye neepesika zefairy zibonelela ngemithombo eninzi yevithamini C, B kunye nevithamin E emzimbeni.
Amaminerali: i-calcium, i-iron, i-zinc kunye ne-potassium
Ngokumalunga nenkangeleko, ngokubanzi, zingqukuva ngokumila, kodwa iipesika zinencam etsolo ngakumbi kunye nesiqu.
Ipesika iplamu kwingingqi eseMbindini Inencasa eswiti nemuncu, i-acridi ephakathi. Ifescue ngumthi omkhulu onemithi yetropiki. Isiqhamo somvubu sinencasa kakhulu, simile okwentsimbi enye incam edityaniswe kwisiqu kunye nesinye isiphelo sinenkaba. Ulusu lwangaphandle lweepesika zeplum lunemibala emininzi eyahlukeneyo, kunye neentlobo ezimhlophe, ezibomvu kunye neblue. Ngokukodwa, ngaphakathi kwe-Central plum peaches kukho imbewu encinci emdaka, enkulu kakhulu, ngokungafaniyo neepesika ze-fairy, ezinembewu enye enkulu kuphela.
Indlela yokwahlula iipesika?
Ngaba iipesika zaseTshayina zingatyiwa?
Ipesika entsonkothileyo Imvelaphi inxulumene nebali laseTshayina Uhambo oluya eNtshona, ngoko bekusoloko kubonwa njengesiqhamo “sokungafi”. Isiqhamo sePeach sikhule ngokubanzi kuwo onke amaphondo aseVietnam kwaye iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zineempawu ezihambelanayo.
Ukuchonga iipesika zaseTshayina
Ngalo lonke ixesha ixesha lepesika lifika, kukho iindidi ezininzi ezahlukeneyo zeepesika kwimarike yeziqhamo yelizwe. Enye yezona ntlobo zixhaphakileyo zidibana ne-peach yi-peach egudileyo, engekachongwa okwangoku.
Ipesika yaseTshayina ludidi lwepesika “engaqhelekanga” ngasentla. Ngokwabarhwebi abancinci abasasaza olu hlobo lwepesika, iipesika zaseTshayina zikhulu kakhulu, ulusu lwangaphandle lutyheli-mhlophe luxutywe namabala abomvu, eyona nto ikhethekileyo kwesi siqhamo sikhethekileyo kukuba asinantsiba, kodwa ngaphandle kumtyibilizi kakhulu kwaye umtyibilizi. Inyama yesiqhamo icrispy kakhulu ngaphakathi kodwa ipulp is sponji kodwa ayiqinisekanga ngenyama, incasa ilula kunepesika zaseVietnam.
Ukwahlula ngeepesika Sapa Vietnam
Iipesika zaseVietnam Ikhuliswe kakhulu e-Sapa kwaye idume ngencasa yayo emnandi. Abathengi abangenawo amava kunye nolwazi malunga nezi ntlobo zimbini zeepesika baya kuthenga ngokulula isiqithi saseSapa saseVietnam esingalunganga kwiipesika zaseTshayina ngaphandle kokwazi. Ngako oko, eyona ngongoma ilula ukwahlula phakathi kwe-Sapa kunye neepesika zaseTshayina isekelwe kwimilo yangaphandle kunye neempawu zencasa ngaphakathi. Iipesika zeSapa zincinci ngobukhulu, zinesikhumba esirhabaxa, azigudi njengeepesika zaseTshayina kwaye zineenwele ezininzi. Xa zityiwe, iipesika zinencasa emuncu yendalo exutywe nencasa eswiti nentsha, kwaye i-pulp icrispy kakhulu, idala imvakalelo enomdla yokuba abantu batye.
Indlela yokupheka iipesika ezimnandi nezipholileyo ehlobo
I-1kg iPeach Fresh: Ngokuxhomekeke kwiimfuno zomlomo womntu, iya kulungiswa kunye nomthamo ohambelanayo.
1/2kg iswekile yelitye
Amanzi amaminerali, ityuwa emhlophe, i-lemon entsha kunye ne-ice cubes
Isiphumo yiglasi emnandi yejusi yepesika
Yenza i-peach peel kwaye imanzise iipesika ezinetyuwa kwithuba lemizuzu eli-15 ukususa incasa ye-acrid kunye nencindi yepesika. Qaphela ukuba xa uhlambulula iipesika, ziya kuhlala zifakwe emanzini anetyuwa ukuphepha ubumnyama beepesika.
Ngelixa iipesika zifunxa, lungisa amanzi aneswekile ngokufudumeza iswekile kubushushu obuphantsi de inyibilike kwaye ijike umbala wamaphiko amaphela, wongeze malunga ne-1 ilitha yamanzi kwaye ubilise.
Iipesika nje ezivuthiweyo zokufunxa iswekile
Thatha iipesika uzibeke kwimbiza enamanzi aneswekile abilayo malunga nemizuzu emi-5 ukufunxa ubumnandi beepesika. Ade amanzi abilise kwakhona, khupha iipesika kwaye uzifake kwi-ice cubes ezilungiselelwe kwangaphambili ukuze iipesika zibe crispy kwaye ziqine xa zifakwe kodwa zingabikho emva kokubilisa ngeswekile.
Lindela imbiza yamanzi eswekile ukuba iphole ngokupheleleyo, uze uyibeke kwingqayi yeglasi kunye neepesika, uyigcine efrijini ukuyigcina ixesha elide ukuphepha ukubola kunye nokunambitha. Xa usebenzisa, unokongeza izilayi ezimbalwa zelamuni ukwenza incasa ibe mnandi kwaye ibe mnandi kakhulu.
Zeziphi izitya ezinokulungiswa ngeepesika ezifakwe emanzini?
Kwiminyaka yakutshanje, endaweni yokusebenzisa iipesika ezicoliweyo ngokuthe ngqo, abantu baphinda basebenzise njengesithako esitsha ukusetyenzwa kwezinye izitya ezahlukeneyo nezinomdla. Ezinye zezona zidlo zidumileyo ezenziwe ngeepesika ezivutshiweyo zezi:
Iti yepesika eneepesika ezivundiweyo: Esi sisiselo esithandwa ngabantu abaninzi abaselula ngenxa yencasa eswiti, ivumba leepesika ezixutywe nencasa emuncu yelamuni, idala imvakalelo enomdla. Ngaphezu koko, ineswekile encinci kwaye isempilweni kuneziselo ezithambileyo zekhabhoni okanye iti yobisi eneswekile ephezulu.
Ikhekhe lempuku emnandi yepesika
Ijam yepesika: Xa iipesika zigalelwe iswekile, tshintsha nje isixa seswekile kunye nendlela yokupheka, sinokuba nejam ekhangayo yepesika. Ijam yePeach ihlala ivela kwiholide yeTet yemveli kwaye ikwajongwa njengesnack kwiintsapho ezininzi. Ngomthombo wendalo weepentshisi ezitsha, i-peach jam ayimnandi kakhulu, ineswekile eninzi, kodwa inokukhanya kakhulu, iphunga elimnandi kunye nencasa emuncu. Ngoko ke, oku kunzima kakhulu kubantu abaninzi.
Ukuze ukwazi ukukhetha ukuthenga i Iipesika zeFari Ukufumana izitya ezitsha kunye nezona zihlwabusayo ezenziwe kwesi siqhamo, kufuneka ukhethe amaziko ahloniphekileyo, uthenge kwigadi yomlimi. Okanye ukuba awukwazi ukuza kule ndawo, ungabi naxesha lasimahla, ungathenga kwi-Intanethi eVinfruit – nanku umsasazi othembekileyo weziqhamo zasekhaya nezangaphandle, ukuhlangabezana nemigangatho yokuthumela ngaphandle kunye nokungenisa elizweni. Ngeminyaka eyi-5 yokusebenza, iVinfruits iqinisekisile indawo yayo kwiintliziyo zabathengi kunye neenkqubo zayo zokwelula. Ukukuzisela iimveliso zeziqhamo ezinencasa yaseVietnam, ezikhuselekileyo nezikumgangatho ophezulu.
Dâu Da Xanh Miền Tây Chua Chua Ngọt Ngọt Ăn Cực Đã | Hatgiongtihon.net